Qiima dhimista miyey qiime dhimaysaa nooc ka badan Bilaash? | Martech Zone
Sicir-dhimista miyey qiimo-dhimaysaa nooc ka badan Bilaash?
Talaado, Maarso 17, 2015 Talaado, Maarso 17, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka wadnay dood wanaagsan oo ku saabsan bandhiggeyga soo socda ee Suuq-geynta Warbaahinta Adduunka ee ku saabsan nooca dalab ee aan u sameyn karno dadweynihii ka soo qaybgalay kal-fadhigeyga ama munaasabadda guud ahaan. Wadahadalku wuxuu la yimid haddii ama aan la helin qiimo dhimis ama ikhtiyaar ikhtiyaari ah oo qiimo u leh shaqada aan bixin doonno.
Mid ka mid ah casharadii aan bartay ayaa ah in mar haddii qiimo la dejiyo, qiimaha la dejiyo. Caadi ahaan kuma xirna nooca natiijooyinka aan helayno macaamiisheenna, waxay had iyo jeer ku noqdaan waxa aan do iyo waxa ay yihiin na siinaya inaan sameyno marka loo eego iibiyeyaasha kale. Marka - haddii aan u siino macmiil mashruuca ugu horreeya ee aan bixinno, weligeen ma arag iyaga oo ka doorta mashruuc labaad qiimaha buuxa. Anaga ayaa qaladkeena leh… waxaan qiimeynay shaqadeena annagoo ka gaabinay kaqeybgalka hore.
Qiimo dhimis qoto dheer ayaa qiimo dhac ku keenta badeecad ama adeeg, taasoo xadeynaysa awooda shirkadaha ay kor ugu qaadi karaan qiimaha. Rafi Mohammed, HBR Ka qod qiime dhimista.
Dhowr toddobaad ka hor, waxaan tan kala hadlayey saaxiibkay James oo iska leh Pizzeria Indianapolis. Wuxuu ii sheegay inuu ka doorbidi lahaa inuu bixiyo intaan wax dhimis samayn lahaa. Dadka muunad ka bixinaya cuntada bilaashka ah waxay aqoonsan yihiin qiimaha cuntada halka kuwa ka soo baxay kuubon ay u yimaadeen uun heshiiska - ma ahan tayada cuntada. Kuuboonaduhu waxay hoos u dhigaan wax soo saarka iyo adeegga sidaa darteed James wuu joojiyay inuu sameeyo.
Maaddaama macaamiisha rumeysan yihiin in qiimaha badeecadda bilaashka ah ay u egtahay inay la jaan qaadi karto qiimaha badeecada la iibsaday, ku biirinta sheyga bilaashka ah ee alaabada dhammaadka leh waxay si aad u wanaagsan u kordhin kartaa aragtida qiimaheeda. Mauricio M. Palmeira (Jaamacadda Monash) iyo Joydeep Srivastava (Jaamacadda Maryland) Goorma ayey Isticmaalayaashu Ka Fikirayaan Freebie Inuu Ka Qiimo Badan Yahay Badeecadda Dhimista Leh?
Tani waa sababta maraakiibta free ayaa caan ku ah goobaha ganacsiga. Halkii aad qiimayn lahayd badeecada aad iibinaysid, waxaad siineysaa wax intaa dheer - fikrad fudud oo macaamiisha ay ku fahmi karaan iyadoon hoos loo dhigin sheyga ama adeegga.
Natiijooyinkayagu waa sheeko, dabcan. Waan ognahay in marka aan gorgortan ka galno waxyaabaha aan qabno ay tahay inaan iska dhaqaaqno halkii aan ka gaabin lahayn qiimo dhimis Ama waxaan go'aansan karnaa haddii ay jiraan wax soo saar ama adeeg dheeri ah oo aan awoodno inaan ku darno. Tusaale ahaan, macaamiisheennu waxay helayaan warbixin toddobaadle ah iyo bille ah Google Analytics taasoo GA ka dhigaysa warbixin aad u wanaagsan, akhrinta oo u fiican aragtida guud. In kasta oo aan bixinayno adeegga, waa qiime ku dar in aan si farxad leh u bixin doonno illaa inta si buuxda looga siinayo adeegyada aan bixino.
Shirkadaha tiknoolajiyada suuqgeynta, waxaan kugula talin lahaa tijaabo bilaash ah qiimo dhimis maalin kasta. U oggolow in macmiilku tijaabiyo barnaamijkaaga oo uu u arko qiimaha naftooda - ka dibna si farxad leh ayey u bixin doonaan adeegga.
Ma dhimaysaa? Ma waxaad arkaysaa natiijooyin kala duwan?
Tags: rasiidhqiimo dhacdhimisqiimo dhimis iyo bilaashfree
Kormeerka Ololaha: Adeeg E-mayl Adag oo Hay'ad ama Ganacsi ah
Haa. Marnaba qiimo jabin
sicir-dhimis ballaaran had iyo jeer waa arrin jahwareer ka badan sicirka sidaas darteed hoos u dhaca heerka kalsoonida